Articles Published in March, 2018 | Sagal Radio Services
Xaruntii Isgaarsiinta Hormuud ee Deegaanka Dhamase oo la Burburiyey
Maamulka Degmada Balcad oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay degmada Balcad
Guddoomiyaha degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe Qaasim Cali Nuur ayaa ku tilmaamay weerarkii shalay ay ku soo qaadeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab inuu ahaa mid ay ku doonayeen inay burburiyaan buundada degmada Balcad balse ay ka difaaceen ciidamada ammaanka.
Dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Laanta Buuro ee G/Shabeelaha Hoose.
Sagal Radio Services • News Report • March 4, 2018
wararka idaacadda kulmiye ay ka heleyso degaanka Laanta Buuro ee gobolka Sh/Hoose ayaa ku waramaya inuu halkaasi ka dhacay dagaal culus kadib markii ay Al-shabaab weerar ku qaadeen Saldhig ay ciidamada Amisom ku leeyihiin deegaanka Laanta Buuro.
Xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada Dowladda iyo Al-shabaab oo ka taagan Balcad.
Wararka laga helayo degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ay ka taagantahay xaalad kacsanaan ah , iyadoo dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan in mar kale degmada ka dhaco dagaal.